ITasko: Isikhathi Sokukhipha Imisebenzi Yakho Yokumaketha | Martech Zone
ISonto, Ephreli 16, 2017 NgoMsombuluko, Ephreli 17, 2017 Douglas Karr
Eminyakeni edlule, siqaphele ukuthi okulindelwe kuvame ukwanda namakhasimende ethu ngenkathi izindleko zokuzibandakanya zingakenzi. Empeleni, ngonyaka odlule sichithe cishe i-15% unyaka nonyaka senza umsebenzi owengeziwe wamakhasimende ethu. Lokho bekungaba kuhle ukube besinezinsizakusebenza, kepha besimane singenzi njalo. Bekufanele senze izinguquko ezinqala uma sithemba ukugcina i-ejensi yethu iphilile.
Enye yezinsizakalo eza kithi yayi Tasko. UTasko wakha uhlelo lokuphatha lomsebenzi oluyinkimbinkimbi, walupha ithalente, futhi wasebenzisa isakhiwo esinamandla sokubuyekeza izigaba eziningi kuso. Umphumela ube yinsizakalo yokulawulwa kwemisebenzi enokwethenjelwa futhi enembile eholele ekutheni kube nesilinganiso sokwaneliseka kwamakhasimende esingu-99%.
Sanquma ukubeka uhlelo esivivinyweni kwelinye lamakhasimende ethu, i Ukulawulwa kwezinambuzane zase-Indianapolis inkampani. Ngenkathi besigxile kuma-athikili ajulile nemidwebo ezinhlotsheni zezilokazane abasebenza kuzo, besicabanga ukuthi kungaba kuhle impela uma singathumela iqiniso ngosuku ngalunye ezindaweni zabo zokuxhumana. E-Tasko, si-ode amahora angama-30 esikhathi ukuthi sicwaninge futhi sithole izibalo ezihlobene nezinambuzane zezinambuzane ezithile futhi sazichaza lezo zibalo ukuthi kufanele zisesikhathini ngonyaka odlule.
Asigcinanga ngokucela idatha, sicela nokuthi ifayili elibuyisiwe lifomethwe ukuze lingenisweI-Hootsuite Isheduli enkulu. Ngemuva kwesonto, sathola ifayili lethu futhi laliphelele! Ngaphakathi, senze ushintsho oluncane ukuze sinikeze izinambuzane isikhathi nenkathi ukukhulisa ukuzibandakanya nezithombe ezicacisiwe kuzibuyekezo ngalunye. Umphumela waba ukuthi sasineqiniso elilodwa ngosuku ngezinambuzane ezihlelelwe unyaka wonke ku-Twitter, Facebook naku-Google +!
Lesi yisibonelo esisodwa nje sokuthi iTasko ingasetshenziswa kanjani, kepha sikholwa ukuthi ukusetshenziswa okuhle impela! Imisebenzi ejwayelekile yokuxhasa ukumaketha evame ukucelwa ukukhomba imikhondo, ukucebisa uhlu loxhumana nabo, ukudala okuqukethwe kwezokuxhumana, ukukhomba abenza izinqumo, noma ukusabalalisa okuqukethwe ku-inthanethi.
Nayi eminye imisebenzi yokukhangisa eyenziwe nguTasko:
Thola oxhumana nabo abafanelekile ku-LinkedIn, cwaninga imininingwane yokuxhumana bese ufaka oxhumana nabo abasha kwi-CRM.
Rekhoda i-600 iholela kuspredishithi sendawo yokuthengisa esekelwe isihloko somsebenzi.
Faka imikhiqizo, kufaka phakathi imininingwane, incazelo, izithombe njll ku-akhawunti yami ye-Shopify.
Khetha izithombe eziyishumi eziphezulu ezabiwe ku-Instagram emahoreni angama-10 adlule amakwe nge-hashtag ethile.
Ukwakha inkomba yama-startups aseJalimane athole uxhaso lwe-Series Seed noma i-Series A ezinyangeni eziyi-12 ezedlule ezingenalo uhlelo lokusebenza lweselula.
Nikeza uhlu lwamawebhusayithi aseSweden anezinga le-Alexa elingaphansi kwama-20k, asekela isiNgisi, futhi asekele ukubekwa kwezikhangiso.
Bhala i-interview (ubude besi-2: 28: 00)
Dala izingxoxo nge-Facebook Messenger bot.
Digitize amakhasi amaningi wamanothi abhalwe ngesandla ngezifundo zamacala ku-Word Document. Gqamisa noma yini engaqondakali bese unamathisela kwimidwebo.
Amanani alula - $ 5 US ngehora ukulethwa okujwayelekile kanye ne- $ 10 US ngehora ukulethwa okucacile.
Oda Umsebenzi kuTasko
Tags: ucwaningo lokumakethaumsebenzi wokumakethaimisebenzi yokumakethatasko
Ukukhipha i-TV ku-Lift Brands